alldayniie.com » Priyanka Chopra “Waxaa La Igu Waaniyay Inaan Sameynin Filmada Kala Ah Aitraaz & Fashion”
Priyanka Chopra “Waxaa La Igu Waaniyay Inaan Sameynin Filmada Kala Ah Aitraaz & Fashion”
Priyanka Chopra ayaa wareysi dheer siisay majaalada Forbes ayadoo daaha ka qaaday arimo badan oo naga qarsoona.
PeeCee waxay sheegtay inee jeceshahay dadka iyada daba gala, hadaba xidigtaan ayaa sido kale sheegtay in hada kahor lagu waaniyay ineysan sameynin filmada kala ah Aitraaz iyo Fashion.
“Yaraanteyda qorsho dhamestiran malahen sido kale waxa ii wanaagsan iyo waxa caqabada igu ah makala aqoon anigoo arin walba shab iska dhahaayo balse qatarka nolosheyda ugu weyned waxay ahed anigoo aqoonin waxa iixun iyo waxa ii wanaagsan.”
35 jirtaani waxay hada kahor jishay doorka laadarnimo ee Sonia Roy Filmka Aitraaz waxayna sheegtay in loog digay in filmkaan ay sameyso hadi aysameysana hormarkeda fanka caqabad ku yahay ayadoo laga dhaadhicinaayey in uu door xun yahay.
“Waxaa la iiga digi jiray xili walba in aanan sameynin filmka Aitraaz sido kale cabsi ayan daremi jiray marka dadka sidaa igu dhahaan balse goaan adeegeyga ayaan kusameyay filmkaas.”
“Sido kalefilmka Fashion ayaa markale dadka iga waanin jireen in aanan sameynin ayagoo iiga digaayo in aan wax hormar ah ku gaareynin sido kalena shaqadeyda ku weyni karo aadbaan u cabsan jiray anigoo qatar walba nafsadeyda galinaayey mana ogeyn waxa aan kala kulmi doono sameynta filmadan.”
Waxaa xusid mudan in Priyanka filmka Fashion ku qaadatay abaal marinta National Film Award qeybta atirishada ugu wanaagsan ee ay dowlada India bixiso sido kale Filmfare Award sanadkii 2008 abaal marinta atirishada ugu wanaagsan ayee ku qaadatay filmka Fashion.
Filmka Aitraaz marka aan u nimaano abaal marinta laadarka ugu wanaagsan ayee ku qaadatay xidigtaan oo ay shirkada Filmfare Award bixiso.